पिम्पल्स निस्कियो? नसुर्ताउनुस् – खबरम्यागजिन
Homeस्वास्थ्यपिम्पल्स निस्कियो? नसुर्ताउनुस्
पिम्पल्स निस्कियो? नसुर्ताउनुस्
November 2, 2017 खबरम्यागजिन प्रतिनिधि स्वास्थ्य 0
– हार्माेन परिवर्तन पनि एक्ने निस्कने समस्याको कारण हुनसक्छ । समयमै महिनावारी नहुनु पनि यसको कारण बन्न सक्छ । यस विषयमा पनि चिकित्सकको परामर्श उपयोगी हुन्छ ।